सन्दीपको दिल्लीले पहिलो आईपीएल उपाधि जित्ने ४ आधार | Hamro Khelkud
सन्दीपको दिल्लीले पहिलो आईपीएल उपाधि जित्ने ४ आधार
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) आगामी मार्च २३ देखी भारतका विभिन्न सहरमा सुरु हुँदैछ । ८ फ्रेन्चाइच टोली रहेको प्रतियोगितामा होम अवे मैदानमा गरि हरेक टिम एक अर्कासँग २ पटक भिड्नेछन् । डवल राउण्ड रोविनपछि शिर्ष चार टोली प्ले अफमा पुग्ने छन् ।
४. रबाडा र बोल्टको गति
३. ओपनिङ जोडी
कुनै पनि टोलीलाई विशाल योगफल तयार पार्न र पुरा गर्न ओपनर जोडीको राम्रो सुरुवात आवश्यक पर्दछ । राम्रो सुरुवात विना विशाल योगफल बनाउन र पूरा गर्न कठिन छ । विश्व क्रिकेटमा बनेका उच्च स्कोरमा सामान्यतया ओपनर जोडीको साझेदारी पनि उत्कृष्ट रहन्छ । दिल्लीमा ओपनरको रुपमा शिखर धवन र पृथ्वी शा रहेका छन् । सनराईजर्स हैदरावाद छाडेर धवन दिल्लीमा आएसँगै दिल्लीको ब्याटिङ झनै बलियो हुनुको साथै ओपनिङ जोडी उत्कृष्ट बन्नेको छ । न्युजिल्यान्डका ओपनर कोलिन मुनरो पनि दिल्लीमै छन् ।
पछिल्लो समय भारतबाट शिखर र न्युजिल्यान्डबाट मुनरोले लगातार ओपनिङ गर्दै उत्कृष्ट प्रर्दशन गरिरहेका छन् । शिखर धनव टी–२० क्रिकेटमा सन् २०१८ मा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी हुन् । धवनले सन् २०१८ मा १८ अन्तर्राष्ट्रिय टी–२० खेलमा ६ अर्ध शतक सहित कुल ६८९ रन बनाएक थिए । गत वर्ष हैदरावादबाट धवनले ओपनिङ गर्दै १६ खेलमा ४९७ रन जोडेका थिए । विश्व टी–२० वरियतामा दोस्रो स्थानमा रहेका मुनरोले सन् २०१८ मा न्युजिल्यान्डबाट १२ टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा १ शतक,४ अर्धशतक सहित १७८.५७ को स्ट्राईक रेटमा कुल ५०० रन बनाएका थिए ।
त्यस्तै भारतलाई यू–१९ विश्वकप जिताएका युवा ओपनर पृथ्वी शा पनि दिल्लीमै छन् । शाले टेस्ट डेब्युमै शतक प्रहार गर्दै सनसनी मच्चाएका थिए । शाको खेल्ने शैलीलाई धेरै विज्ञले भारतीय पुर्व कप्तान सचिन तेन्दुल्करसँग मिल्दो रहेको बताउँछन् । गत वर्ष दिल्लीबाटै डेब्यू गर्दै शाले ९ खेल खेल्दै २४५ रन जोडेका थिए । यी तीन खेलाडी मध्य दुईले ओपनिङ गर्ने छन् । जसले गर्दापनि दिल्लीको ओपनिङ बलियो बन्ने देखिन्छ । ओपनरको उत्कृष्ट प्रर्दशनमा दिल्लीको उपाधि जित्ने सपना साकार हुन सक्छ ।
२. बलियो स्पिन अट्याक
गत वर्ष दिल्लीबाट अन्तिम ३ खेलमा मौका पाएका सन्दीपले ५ विकेट लिँदै सनसनी मच्चाएका थिए । मिश्राले १० खेलमा १२ विकेट लिएका थिए । यी दुवै लेग स्पिनरले आफ्नो गुगालीमा विपक्षी ब्याट्सम्यानलाई सहजै फसाउन सक्छन् । जसको फाइदा दिल्लीलाई पुग्ने छ । दिल्लीले अक्षर पटेललाई पनि अक्सनमा ५ करोड खर्चेर किनेको थियो । भारतीय राष्ट्रिय टोलीबाट खेली सकेका पटेल स्पिन अलराउन्डर हुन् । पटेल आईपीएलमा पनि अनुभवी खेलाडी हुन् । पार्ट टाइमको रुपमा राहुल टेवाटिया पनि राम्रो स्पिनरमा गनिन्छन् । सन्दीप र मिश्रा प्रमुख तथा पटेल र टेवाटिया विकल्पका रुपमा दिल्ली अझ बलियो बनेको छ । जसको कारण उपाधि जित्न सहज हुन सक्छ ।
१. सुदृढ मध्यक्रम
टिमको जित वा हार मध्यक्रमको ब्याटिङ प्रर्दशनमा बढि भर पर्ने गर्दछ । युवा खेलाडी कप्तान श्रेयर ऐर र ऋषभ पन्तले दिल्लीको मध्यक्रम सम्हाल्ने छन् । यी दुई खेलाडीको प्रर्दशन नै दिल्लीले उपाधि जित्ने वा कुन स्थानमा पुग्ने भन्ने बढि निर्भर रहनेछ । यी दुवै खेलाडीले भारतीय टि–२० अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यू गरि सकेका छन् । दुबै ठूला ठूला शट खेल्न माहिर छन् ।
पन्तले गत वर्ष दिल्लीबाटै १४ खेलमा १ सय ७० भन्दा माथिको स्ट्राइक रेटमा ब्याटिङ गर्दै कुल ६८४ रन जोड्दै सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको सूचिमा दोस्रो स्थानमा थिए । त्यस्तै श्रेयरले १४ खेलमा ४११ रन जोडे । पन्तले पछिल्लो समय भारतीय टिमबाट टेस्ट, वान डे र टी २० तीनैमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । यी दुईबाहेक मध्यक्रममा कोलिन इन्ग्राम, अलराउण्डर किमो पाउल, हनुमा विहारी, अक्षर पटेल, राहुल टेवाटिया, हर्षल पटेल जस्ता खेलाडी छन् । जसले गर्दा पनि मध्यक्रम मजबुत देखिन्छ ।
दिल्लीको पूर्ण टोली : श्रेयर ऐर(कप्तान), ऋषभ पन्त, अमित मिश्रा, सन्दीप लामिछाने, शिखर धवन, पृथ्वी शा, आवेश खान, हर्षल पर्टेल, राहुल टेवाटिया, जयन्त यादव, मनजोत कालरा, कोलिन मुनरो, कागिसो रबाडा, ट्रेन्ट बोल्ट, हनुमा विहारी, अक्षर पटेल, इशान्त शर्मा, अन्कुश वेन्स, नाथसिंह, कोलिन इनग्राम, शेरफेन रदरफोर्ड, किमो पल र जलज सक्सेना